-Mongolian Army, kanye nezinye amabutho ahlomile yezwe, okuhlanganisa amabutho umngcele nokuvikeleka amabutho yangaphakathi, ezihloselwe ukuvikela ubukhosi wezwe enkundleni ngamazwe nokuqinisekisa ukuphepha izakhamuzi Mongolia ngaphakathi ezweni uma kunesidingo.
Ukuthola uzibuse ekhulwini XX
Ukuzivikela Amandla eMongolia ezimele baqala ukuvela ngisho phambi wenkululeko ephelele izwe ukusuka ekubuseni Chinese. Amayunithi lokuqala ahlomile zadalwa lapho zokutakula abantu-Mongolian wafika iWhite Guard Baron Ungern nge lamabutho wakhe amasosha Russian. Ngesikhathi Storming ka Urga, yena wahlulwa, kodwa kuphela steeled amasosha akhe futhi spodviglo zonke kwezakhi zenhlabathi emphakathini-Mongolian ekuxhumaneni eduze ne Liberation Army.
Lezi zincwadi izinto nokusekelwa kulezo engingakwazi isibusiso Baron esizayo wathumela bogdyhan ezimele Mongolia Bogd gegen Vlll. Waqala kanjalo-ke ukwakhiwa uhulumeni amabutho ahlomile. Ngokushesha ngemva ngokunqoba uhulumeni waseChina zadalwa amayunithi ukuzivikela. ezempi ngo Mongolia ngaleso sikhathi kwaba kuphoqelekile zonke, ngenxa yesimo esidabukisayo izwe futhi isidingo sokulondoloza ngokuzijamela omakhelwane nolaka. Nokho, kuleli zwe yabonisa umlekeleli ethembekile futhi enokwethenjelwa - Red Army, okuzokwenza usinde emzabalazweni nge iWhite Guard amaphoyisa nabahlaseli Chinese.
I Yabantu Army of Mongolia
Damdin Sükhbaatar baba hero of the emzabalazweni ngokumelene abahlaseli amaMongol, wabuye wasungula-Mongolian Yabantu Revolutionary Party salibangisa inguquko ethandwa ngo-1921. Kuze kube ngo-2005, enhloko-dolobha, kwakukhona Mausoleum wakhe, Nokho, okuyinto, ladilizwa ukwenza endaweni yawo kwamiswa itshe lesikhumbuzo uGenghis Khan. Ngesikhathi esifanayo umholi inguquko basala ukuba honours ezifanele, futhi onesizotha ukushiswa kwesidumbu emcimbini ubuhanjelwe abefundisi nabantu abaningi abangamaBuddha.
Yabantu Republic Army wadalwa iqhaza ngqo ongoti Soviet sihlome ezinhle kunazo ubuchwepheshe Soviet. Njengoba ngumeluleki ebalulekile Mongolia wavakashela ngisho Marshall Zhukov.
ibutho-Mongolian eMpini Yezwe II
Kwakona okusobala engasafuni, Mongolia wajoyina impi ngenxa iphutha yebutho Japanese, lelo, kanye isimo Manchukuo wawela umngcele-Mongolian wafinyelela Khalkhin umgomo, okwakuyigama imbangela ukungqubuzana engamenyezelwe.
Nakuba impi-Mongolian namanje iwine kule mpi eside egijima, yena wayengeke akwenze ngaphandle kosizo.
Isimo Manchukuo wadalwa Japanese umsebenzi ukuphatha nje niqhube okuhlaselayo yayo endaweni yeChina, eMongolia neSoviet Union. Yiqiniso, kuyaqondakala kahle, umyalo wamaSoviet wawungakwazi ukuthikameza ushiye omakhelwane bethu ngaphandle ukwesekwa.
Ngakho eMongolia kwakuwumbhangqwana abeluleki ezempi kanye izikhali ngaphansi kweSoviet Union, okwaphumela isikhathi wokubambisana eside futhi ethela phakathi ezimbili uthi. Izwe abaseSoviet yanikezwa Republic izimoto armored futhi izikhali ezincane, kuyilapho kumila ibutho-Mongolian kwaba mabutho, ngaphansi kwemibandela ye emaqeleni futhi ogwadule ikhono unqobe ibanga 160 km ngosuku. Ibutho laseSoviet e Mongolia ngaphambi ngemvume isivumelwano China ku zokunciphisa ibutho emingceleni, ngemva kwalokho eSoviet iqembu sebutho sasifisa ezifuywa insimu-Mongolian ngo-1989.
Soviet-Mongolian nobambiswano 1960
Mongolia e sixties kwaba uhlobo sesikhashana zone bekumnyama tshu yoke indawo.Wahlukanisa Union neChina, ogama ubudlelwane kwakungafanele enobungane njalo. Kwake kwathi ngo-zeSoviet Union, baqala inkampani anti-uStalin, China wathi umbhikisho yayo kanye nobudlelwane saqala ukwehla ngokucijile, futhi ekupheleni the 60s-ntshonalanga iqembu elinamandla lempi lamiswa ngo China, esongela hhayi kuphela-Mongolian Yabantu Republic ne-Soviet Union.
Ukuphendula isinyathelo China argessivnye ubuholi Soviet wanquma ukuqinisa ukubakhona alo ezempi e-Asia. Isibalo iqembu Yabantu Liberation Army yayinkulu, kodwa esiqiwini wayeneminyaka engaba ngamashumi amathathu elihamba ukwahlukana, futhi isibalo amathangi kanye missile iziqhumane safinyelela ayizinkulungwane eziyishumi. zinsongo ayikwazanga indiva.
Ziqaphela usongo China, uhulumeni wamaSoviet awuzange ukuth wethula redeployment of amabutho akhe ahlomile amasha kusukela maphakathi nezwe ukuze Ekude nomngcele waseChina-Mongolian. Ngemva lezi zinyathelo, iqembu tank at nomngcele waseChina ifinyelele amayunithi 2,000.
Army Democratic Mongolia
ibutho-Mongolian, okuyinto olunezinombolo ngesikhathi Democratic Revolution ngo-1990 sasisekelwa ngezithukuthuku izinsizwa jikelele nabeluleki ukuphuma ngaphansi kweSoviet Union, uye washintsha ezinkulu. Ngalesi sikhathi, ngo-izinguquko ibutho waba nengxenye Ochwepheshe American.
Ngo XXL ibutho-Mongolian ekhulwini yehlile kakhulu futhi isibalo saso kwaba abantu abayizinkulungwane eziyishumi Army, nabezempi ezahlukene mayelana eziyizinkulungwane eziyisikhombisa omunye umkhumbi wezempi, ngokusekelwe eLake Uvs Nuur.
Naphezu kobungako nobuningi bayo encane, ibutho wezwe bahileleke ngamazwe nemikhankaso yokugcina ukuthula e-Afghanistan Iraq futhi sekukaningi badunyiswa ngokunikwa udumo kusukela kubangane bawo.
Ibutho entsha-Mongolian, elibonisa izithombe esihlokweni, siyinhlanganisela eliyingqayizivele kwabasebenzi oqeqeshwe kahle futhi kungase kutholakale empini nezempi. Isici esiphawulekayo indlela yokufuna-Mongolian Armed Forces wukuthi senkonzo yezempi kungase angavezwa ukukhokha ngesikhathi esifanayo inani elilingana mayelana nengxenye dollar ayinkulungwane bese usetha isimo.
Kungenzeka yini ukuba uthole ukukhoseliswa ezombusazwe e-US
Clipper Professional - iseluleko okukhetha
Mouse ivumelane izandla zabo: Iphethini, impahla, ukuthunga
Hollywood abadlali - amadoda: ethandwa kakhulu, edumile futhi abanamakhono
I-sauna engathintekile. Ukungafani nokuzinzuzo
Periarthritis Scapulohumeral: uzivivinye Popov, Physiotherapy
Ukulungiselela eziyinkimbinkimbi "Normospectrum '. Ukufundiswa ukufunda
UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki Christmas amathoyizi kusukela izinkomishi epulasitiki. Indlela yokwenza Snowman aphume izinkomishi epulasitiki